सर्वहाराको झुपडी र इनफ इज इनफ
सरकारले सुशासन कायम गर्ने जवाफदेही निर्वहन गर्न सकेन । ओली सरकार भनेको यति ग्रुप, ओम्नी, एनसेल भन्ने पो बुझिन थालियो । यी सबै समूह नेपाललाई शोषण गर्ने र ओली समूहलाई कमिशन बुझाउनेहरु हुन् । राज्य सम्पत्ति र ढुकुटी मार्न पल्केकाहरु यस्तै लोभीपापी समूहसँग मिलेर भ्रष्टाचार गरिरहेका छन्, अनियमितता भइरहेको छ । यहाँसम्म कि राज्यले पाउनै पर्ने लाभकरसमेत लिनुपर्दैन भनेर अदालतले समेत छुट दियो । नेपालमा जे छ, सेटिङमा छ । जे हुन्छ मिलोमतोमा हुन्छ । लेनदेन र लनतनमा हुन्छ । जे हुन्छ, भ्रष्टाचारमात्र हुन्छ ।
नेपालका सर्वहाराका अगुवाको झुपडी हो यो । सर्वहाराको नेताकै यस्तो झुपडी छ भने सर्वहारा समुदाय त योभन्दा राम्रो झुपडीमा बस्नुपर्ने र शिक्षा, स्वास्थ्य र खानपानको राम्रो प्रवन्ध भएको हुनुपर्ने हो । सर्वहाराको यो झुपडीले देशमा रहेका सर्वहारा बर्गलाई जिस्क्याइरहेको छ । ती कस्ता सर्वहारा हुन्, जो यस्तो महलमा बस्ने नेताको पछि लागेर तिनलाई तारणहार मानिरहेका छन् ?
यो भवन कम्युनिष्टको हो । कुनै पनि आयस्रोत नभएका राजनीतिक नेताहरु यस्ता महलहरु कुन आम्दानीले बनाइरहेका छ्न । नारा सर्वहाराको लगाउने, जनताको बहुदलीय जनवादलाई सिद्धान्त बनाउने अनि जनतालाई कागती निचोरेझैं निचोरेर यस्ता आलिशान महलहरु खडा गर्ने ? कम्युनिष्ट न कांग्रेस, मधेशवादी न राप्रपा, सबै राजनीतिक नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन हुनपर्छ । यसप्रकारका महलहरु खडा गर्ने, जीवनस्तर सामन्तको जस्तो बनाउने कुनै पनि नेताको आयस्रोतको खोजी हुनुपर्छ । आखिर जनतामाथि अन्याय गरेर नै यस्ता महल बनेका हुन् ।
नेपाली राजनीतिमा मुख्यतः ४ पार्टीहरु छन्– नेकपा, नेपाली कांग्रेस, मधेशवादी र राप्रपा । कम्तिमा यी ४ पार्टीका नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन हुनुपर्छ । जो राजनीतिमात्र गर्छन्, राजनीतिलाई जनसेवा, राष्ट्र सेवा भन्छन् अनि यस्ता महलमा सामन्ति जीवन बिताउँछन भने निश्चित छ, यिनीहरु राजनीतिका नाममा भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् । अख्तियार निजी क्षेत्रको अधिकारसमेत लिन तम्सिरहेको छ र भ्रष्टाचार नियमन र नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन, अख्तियारले यस्ता नेताहरुको छानबिन गर्न किन अग्रसर नहुने ? अख्तियार भनेको सरकारको निर्देशनमा चल्ने मातहतको विभागजस्तो हुनु कदापि उचित होइन ।
यो सब बिकृति देखेपछि स्वतः स्फूर्त रुपमा युवाहरु सडकमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले इनफ इज इनफको नारा लगाइरहेका छन् । नेपाली समाजमा उखान छ– अति गर्नु अतिसार नगर्नु । ओली सरकारले अतिसार अनियमितता गरेको छ । सहन गर्नै नसकेपछि युवाहरु यसरी सडकमा उत्रिएका हुन् । यिनलाई थाहा छ– नेकपालाई ५ वर्ष शासन गर्ने जनादेश प्राप्त छ । जनादेश जनताप्रति जवाफदेही शासन सञ्चालन गर्नका लागि हो, जनतामाथि अत्याचार गर्न होइन । सरकारले आज जे गरिरहेको छ, त्यो देश र जनतामाथि अत्याचार भइरहेको छ ।
अव युवा जागे । युवा यसरी नै जाग्नुपर्छ । यो त सुरुआतमात्र हो । जब यी युवा आगोसरी डढेलो बनेर बिद्रोहमा उत्रनेछन्, त्यतिबेला भ्रष्टाचारी कता भाग्लान् ?